आजको पत्रपत्रीका बाट Archives - Page 148 of 148 -
राष्ट्रियसभा चुनाव: कुन प्रदेशमा कति मतदादता ?
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य चुन्न सबभन्दा बढी मतदाता प्रदेश नम्बर २ छन् । भने सबभन्दा कम मतदाता प्रदेश नम्बर ६ मा । उक्त दुईवटा प्रदेशको मतदाता संख्या दोब्बर बढीले फरक छ । तर, दुवै प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य भने समान संख्यामा चुनिने छन् । मधेसी दलले प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा राष्ट्रियसभा सदस्य चुनिनुपर्ने...
सरकारविरुद्ध कांग्रेसकै प्रर्दशन, सडकमा निस्किए १५ संघसंस्था
काठमाडौं । सरकारले प्रदेश ५ को स्थायी केन्द्र राजधानी दाङ तोक्ने तयारी गरेको भन्दै कांग्रेस रुपन्देही विरोधमा उत्रिएको छ । आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध कांग्रेसले रुपन्देहीमा विहीबार एक घन्टा चक्काजाम गरेको हो । कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठनले पनि बुटवलमा मसाल जुलुस प्रर्दशन गर्यो । बुटवललाई प्रदेश ५ को अस्...
कसले माग्यो कमल थापाको राजीनामा ? बैठकमा भयो चर्काचर्की
काठमाडौं । राप्रपाको राजधानीमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको राजीनामा माग गरिएको छ। बिहीबार बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले पार्टी पराजयको जिम्मेवारी अध्यक्ष थापाले लिनुपर्ने भन्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। नेताहरूले कांग्रेससँगको गठबन्धन प्रभावकारी बनाउन नसक...
यसरी हुन सक्छ २० दिनमै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन
काठमाडौं। प्रदेश सभाको समानुपातिक उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी अन्तिम विवरण दलहरूले बिहीबार (२० पुस) निर्वाचन आयोगमा पेस गरिसकेका छन् । आयोगले बढीमा तीन दिनभित्र अर्थात् २३ पुसभित्र निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न सक्छ । सरकारले चाहेमा तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबा...
प्रदेशको अस्थायी मुकाम र भवनको टुंगो लाग्यो, कसको कहाँ ? (हेर्नुस् नयाँ सूची)
काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशको अस्थायी राजधानीसहित कार्यालय स्थापना गर्ने भवनहरूको टुंगो लगाएको छ । उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ । प्राविधिकहरू खटाएर भौगोलिक संरचनाअनुसार ठाउँ छनोट गरिएको हो । प्रदेश १ प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी बनाउन मोरङको गोठगाउँ सबैभन्दा उपयुक्त ...
मधेसमा यस्तो पनिः प्रधानाध्यापकबाटै दुई करोड भ्रष्टाचार
सिरहा । लहानस्थित पशुपति माध्यमिक विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक परमेश्वर रायले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको पाईएको छ । उनले विद्यालयको जग्गामा पक्की व्यापारिक भवन निर्माणका लागि उपभोक्ताबाट संकलन गरेको रकम सरकारबाट स्रोत प्राप्त अनुदानमा अनियमितता गरेको छानविनबाट खुलेको हो । विद्यालयका स्रोत व...
साईकल बेच्दाबेच्दै सांसद
काठमाडौं । गत वैशाखमा मध्यविन्दु नगरपालिका ७ मा वडा सदस्य निर्वाचित लक्ष्मी सुनारले सांसद् नै हुँला भनेर कल्पनासम्म गरेकी थिईनन् । वडामा जित्दा दंग परेकी थिईन् । अलिहे प्रदेश सांसद हुँदा खुसीको सीमा नै छैन । 'पार्टीमा काम गर्दै गएपछि एक दिन अवश्य मुल्यांकन हुँदोरहेछ', उनले भनिन् । सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उनले...
एमालेको असहयोगले थप गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति, प्रदेश अस्थायी मुकाम र राष्ट्रियसभा चुनावको मितिमा प्रमुख पाँच दलबीच छलफल भए पनि सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थप परामर्शमा क्रियाशील भएका छन्। देउवाले बिहीबार यी विषयमा सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए। बैठकमा एमाले अध्यक...
पार्टी एकतामा दोस्रो तहका नेताहरुको बारे यसो भन्छन् झलनाथ खनाल
काठमाडौं । एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनलालले दोस्रो तहका नेताहरुबाट पार्टी एकीकरणमा कुनै समस्या नहुने बताएका छन् । पार्टी एकतालाई लिएर एमाले तथा माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरुको अनेक टीकाटिप्पणी आईरहेका बेला विर्तामोडमा विहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता खनालले यस्तो दावी गरेका हुन् । उनले दोस्रो तहका...